Manamarika ny faritra Avaratra Andrefanan’i Madagasikara iny ny fisian’ny tondra-drano na dia tsy misy rivodoza matetika aza. Noho izay indrindra dia miisa 58 ny finday miaraka amin’ny puce, 5 ny tablettes nomena ny fikambanana Medair. Tanjona ny hanampiana ny mponina mipetraka any amin’ny distrikan’Ambanja, izay nosafidiana manokana noho ny tondra-drano mateti-piavy any mba ahafahan’izy ireo miatrika am-pitoniana izany ary mandray ny fanairana mialoha, mandritra ary aorian’ny loza. Ny fikambanana Medair dia misahana ny fanampiana amin’ny lafiny maro amin’ny fiatrehana ny tondra-drano. Miara-miasa amin’ny Birao Nasionalin’ny Fitantanana ny Loza Voajanahary (BNGRC) sy ny Fondation Telma izy ireo ary misehatra any amin’ny toerana marefo indrindra indrindra.